Inyaniso YoBukumkani—Ukusasaza Inyaniso YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChin (sesiHakha) IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHerero IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLaotia IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLunda IsiLuvale IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMaya IsiMoore IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNias IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSena IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTotonac IsiTshayina SaseCanton (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseCanton (Esiqhelekileyo) IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
Ngasekhohlo: Ekupheleni kweminyaka yee-1930 udade waseAlabama, eMerika, umamele intetho kaMzalwan’ uRutherford; ngasekunene: ESwitzerland
ISIFUNDO sakho seBhayibhile siyothuka njengoko siqonda intsingiselo yombhalo enisandul’ ukuwufunda. Sithi, “Utheth’ ukuba iBhayibhile ifundisa ukuba singaphila eParadesi ngonaphakade—apha kulo mhlaba?” Umntu ohamba naye entsimini uyancuma aze athi, “Ithini iBhayibhile?” Simangalisiwe, sinikin’ intloko size sithi, “Ndimangaliswa kukuba andizange khe ndiyifundiswe le nto!” Ukhumbula ukuba sikhe sathetha into enjengale kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo xa besiqala ukuva ukuba igama likaThixo nguYehova.
Ngaba wena yakha yakwehlela into enje? Kuye kwanjalo kubantu bakaThixo abaninzi. Zimbalwa izinto ezisikhumbuza ngokucace kangangaka ngesipho esixabisekileyo esinaso—ulwazi lwenyaniso! Kodwa ke khawucinge: Wasifumana njani eso sipho? Kweli candelo siza kuhlolisisa loo mbuzo. Indlela abantu bakaThixo abaye bakhanyiselwa ngayo ngeLizwi likaThixo ibonisa ukuba uBukumkani bukaThixo buyinto yokwenene. Kangangekhulu leminyaka, uKumkani wabo, uYesu Kristu, ebesenza izinto eziqinisekisa ukuba abantu bakaThixo bafundiswa inyaniso.
Ngaba uBukumkani babuyinxalenye yenjongo kaThixo yantlandlolo? UYesu wakhanyisa njani ngoBukumkani?
UBukumkani bulenzele ntoni igama likaThixo? Wena, yintoni onokuyenza ukuze ungcwalise igama likaYehova?
Bazi kakuhle uBukumkani bukaThixo, abalawuli nabantu abaza kulawulwa bubukumkani, nezinto ezifunekayo ukuze unyaniseke kubo.